Canada ọ ga-amachibido Turkish, Lufthansa, Austrian, Qatar Airways, Aeroflot na Ukraine International Airlines iwu?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Canada ọ ga-amachibido Turkish, Lufthansa, Austrian, Qatar Airways, Aeroflot na Ukraine International Airlines iwu?
Airlines • Airport • Austria na -agbasa ozi ọma • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Crime • Editorial • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Prime Minista Canada Justin Trudeau kwuru na Satọdee na gọọmentị ya lekwasịrị anya bụ ịza ajụjụ na ikpe ziri ezi maka ndị ihe metụtara ụgbọelu ndị Ukraine nke Iran kwuru na ọ gbagburu ha na mberede. Nke a ọ pụtara Canada ga-amachibido iwu Turkish Airlines, Lufthansa, Ọstrịa, Qatar, Aeroflot, na Ukraine International Airlines site na overflying na ọdịda na Canada?
Ekwesịrị ịhapụ Malaysia ka ọ rụọ ụgbọ elu? Tajụjụ ndị Flyers Right jụrụ ya na 2014 mgbe Malaysian Airlines gbadoro anya gabiga Ọwụwa Anyanwụ Ukraine, mpaghara agha. MH 370 gbagburu na mberede na onye njem ọ bụla nọ n'ụgbọ ahụ nwụrụ. Otú ọ dị, Malaysia ụgbọ elu mụtara ma nọrọ na mbara igwe ikuku Iran.
Ugbu a, ụgbọ elu mba nke Ukraine kwesịrị ịma nke ọma. Na enweghị nchekasị, onye ọrụ ụgbọ mmiri Ukraine mere mkpebi siri ike ifefe mpaghara agha, kpọọ Iran ndị na-egbu ndị njem 176 na ndị ọrụ ya.
Fourbọchị anọ ka nke ahụ gasịrị, enweghị mgbaghara maka ọtụtụ ndị ahụ site na njikwa nke ụgbọ elu Ukraine Internati0onal, mana ịchọrọ maka ịkwụ ụgwọ site na Iran, kedụ ihe bụ arịrịọ ezi uche dị na ya. Nyaahụ eTurboNews atụ aro Lufthansa Group nwekwara ikpe mara n'igbu ndị njem 176 ma tinye ọtụtụ narị ndị ahịa nke ha n'ihe ize ndụ.
Enwekwara mgbaghara ma ọ bụ Turkish Airlines, nke Lufthansa, nke ndị Austrian Airlines, Aeroflot na Qatar Airways na-enweghị mgbaghara maka ihe atụ na ụbọchị ọjọọ ahụ. O yikarịrị ka ọ bụla n'ime ụgbọ elu ndị a ga-ekweta na ha mere ihe ọ bụla na-ezighi ezi na ịga n'ihu na-efega Iran n'oge oge na FAA achọpụtara na ikuku agaghị adị mma ma gbanwere iro n'etiti Iran na United States.
Ma ọ dịkarịa ala Iran mechara bilie ma kweta na ikpe mara ya. Nkwupụta ikpe a mara ikpe kwesịrị ka ndị ọzọ metụtara.
Nye ji ụgwọ ụgwọ maka ezinụlọ nke ndị njem 176 na-agaghị anwụ na Wednesde? N'ezie, Prime Minista Canada Justin Trudeau na Onye isi ala Ukraine Volodymyr Zelensky ziri ezi na-achọ ikpe ziri ezi n'aka gọọmentị nke Islam Republic of Iran.
Ma, Maazị Trudeau ekwesịghịkwa ịrịọ ụgwọ maka ụgwọ ndị Ukraine International Airlines, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Aeroflot na Qatar Airways?
Ndi Canada enweghi ezigbo ihe kpatara itinye ndi oru ugbo a aka ma oburu na ha meghi? Canada nwere ike ịnwe ezigbo ihe kpatara iji machibido ụgbọ elu ndị dị otú ahụ ka ha ghara ifefe mba ha ma debe ikike ha nwere ikike ịlaghachi ruo mgbe a kwụrụ ụgwọ na nkwa ha ga-akwụ, yabụ na ụdị ihe ahụ agaghị eme ọzọ.
PM nke Canada ji nke a nye ụmụ amaala ya 68 na ezinụlọ ha nọ n'ụgbọ elu ahụ dara ada. O nwekwara ọrụ dịịrị ndị Canada niile, ya mere, ọ dịghị onye ọ bụla si Canada ga-emerụ ahụ na ụgbọ elu ụgbọ elu ndị a, belụsọ na ndị na-ebu ụgbọ ahụ ekweghị nkwa ịsọpụrụ FAA na ịdọ aka na ntị ndị yiri ya.
Eziokwu ahụ bụ na ndị ụgbọelu na-azụ ahịa na-efefe mpaghara esemokwu na itinye koodu ahụ pụtara na ndị njem nwere ike ha agaghị ama ụgbọelu ha na-efe mgbe ha na-ede akwụkwọ ụgbọ elu ga-emepe ụlọ ọrụ ụgbọelu maka ọrụ nke nwere ike isiri ike nghọta. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ: Gini bụ ụgbọelu na-efe efe na mpaghara agha?
Ejiri atụmatụ ụgbọ elu narị atọ gafee Ukraine n'ụbọchị MH370 gbadara, n'agbanyeghị ịdọ aka na ntị nye ụgbọ elu banyere 'nnukwu ihe egwu na nchekwa'.
Na Iran, ndị Federal Aviation Authority nke United States nyere ịdọ aka ná ntị yiri nke ahụ ma ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọelu leghaara ya anya.
Na 2014 KLM kwuru na nkwupụta ọ “na-ezere efefe n’elu mpaghara metụtara”. FlyersRights jụrụ KLM ma nke a ọ bụ iwu ochie ma ọ bụ nke ọhụụ. Linegbọ elu ahụ azaghachighị oku anyị kpọrọ maka ikwu okwu.
Akụkọ a na-aga n'ihu….